Fahasalamam-bahoaka – Mikatso tanteraka ny fitiliana ny tsimokaretin’ny Sida - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fahasalamam-bahoaka – Mikatso tanteraka ny fitiliana ny tsimokaretin’ny Sida
Mbola olana. Nanomboka ny volana mey teo no efa tsy nisy intsony ny ranom-panafody fampiasa amin’ny fitiliana ny Vih, tsimokaretina mitondra ny Sida.
“Tsy afaka manatanteraka ny fitiliana aloha hatreto, ka tsy ho fantatra intsony ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina”, hoy ny Dr Rabeson Hervé, mpitsabo etsy amin’ny birao monisipaly misahana ny fahadiovana (Bmh), Isotry, raha nanazava ny mety ho fiantraikan’io olana io eo amin’ny fahasalamam-bahoaka.
Tafiditra ao anatin’ny fisorohana ny mety ho fiparitahan’ny aretina ny tsy fisian’izany ranom-panafody izany ary miankina amin’ny fitondran-tenan’ny tsirairay kosa ny hampifindra na tsia ny aretina.
Nilaza ny avy eo anivon’ny komitim-pirenena misahana ny ady amin’ny sida (Cnls) fa fandaminana eo amin’ny lafiny taratasy no mahatonga ny olana.
“Efa tonga ny ranom-panafody fa mbola eo an-dalana ny fikarakarana ny taratasy famoahana azy”, hoy ny sekretera mpanatanteraky ny Cnls, Razafindrafito Haja.
Tojo olana toy izany ihany koa ny fanafody fitsaboana ny Sida, izay nahitana fahatapahany teo amin’ny famatsiana. Nilaza ihany koa ity tompon’andraikitra ity fa efa tonga ny fanafody izay heverina hahasahana ny filan’ny marary ho amin’ity taona ity.
Niisa 543 000 ireo olona natao fitiliana Vih tamin’iny taona 2011 iny. Ny 409 tamin’ireo no olona vaovao mitondra ny tsimokaretina.
Fahasalamana, SIDA, Mpanoratra Rijakely, 16.07.2012, 08:28	FIARAHAMONINA